महिला मात्र बस्ने अनौठो टापु जहाँ पुरुषलाई प्रतिबन्ध ! | Safal Khabar
शनिबार, १५ फागुन २०७७, १३ : २७
फिनल्याण्ड । बेला बेलामा संसारमा विभिन्न ठाउँ का अनौठा घटनाहरु देख्न र सुन्न पाइन्छन् । तपाइँले दुनियाको यस्तो कुनै ठाउँको बारेमा सुन्नुभएको छ, जहाँ केवल महिला मात्र जान सक्दछन् ? महिला मात्र जाने र पुरुषका लागि जान बन्देज रहेको एउटा टापु छ यो दुनियामा ।